Mgbaaka Cicret, mgbaaka nke ọdịnihu ma ọ bụ gam akporo adịgboroja? | Gam akporosis
Tupu ịmalite ịgụ isiokwu a, ọ dị mkpa ka ị lelee vidiyo dị n'elu n'elu usoro ndị a ka ị wee ghọta echiche nke gam akporo armband na ndị a na-enye anyị site na nchịkọta ego na ndị na-achọ ego iji nweta ụdị mbụ ha na-arụ ọrụ. The futuristic echiche ebe ha dị, na-enye anyị ohere na, si a mfe bangle ịke mgbaaka, site na a pico projector yiri enyo na ihuenyo nke gam akporo anyị ozugbo na akpụkpọ ahụ anyị, ka anyị wee nwee ike ịmekọrịta ya dị ka a ga - asị na ọ bụ ihuenyo ọgbọ na - adị n'ụdị hologram kachasị ọcha.
N'oge a, nke a abụghị naanị ihe ngosi vidiyo ka anyị wee nwee ike ịhụ echiche nke ihe ndị a na-anwa ịzụlite dị ka ihe mbụ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ bụ ezie na ha chọrọ enyemaka nke anyị niile iji nweta euro 700.000. ọ dị mkpa maka ịmepụta ihe mbụ a na-arụ ọrụ.
Ajụjụ ahụ dị aghụghọ karịa ka ọ dị, ọ bụkwa na n'adịghị ka ụdị ndị ọzọ crowdfunding oru nke ahụ na-enye gị ụgwọ ọrụ maka isonye na imekọrịta na ọrụ izizi, na nke a Ọrụ mgbaaka gam akporo nke ọdịnihu, ha anaghị enye anyị uru ọ bụla ọzọ karịa ịkpọtụ aha n'ụlọ nzukọ ha a ma ama ebe ụkpụrụ, ndị ahịa niile site na onyinye site na PayPal ga-apụta, iji mee ka ọ dị mfe dị ka o kwere mee, sonye site na onyinye ndị na-enweghị mmasị na ndị ahụ e kwuru na mbụ Ọrụ Cicret Mgbaaka.
Na mụ onwe m, nke a na-ada ka ojoro na nnukwu ọrụ ebe obu na ahuru m otutu oghere di na oru ngo ndia Mgbaaka Cicret. Ọrụ nke m na-ahụ karịa akụkọ sayensị na-eme ka ndị mmadụ nwee mmasị na iji nweta ụlọ n'ime ha site na echiche efu nke anyị na-enweghị ike, ọbụlagodi maka oge ahụ, iji nweta ihe ebe ọ bụ na anyị enweghị teknụzụ dị mkpa iji nwee ike mezuo nrọ a.
Maka m ọ bụ ihe ọzọ karịa onye ọzọ IWU nke ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na netwọk na naanị ihe ha na-achọ bụ inweta ego n'aka anyị site na ụgha na nrọ na siri ike, ma ọ dịkarịa ala ugbu a, ha nwedịrị ike iji ego niile dị n’ụwa nwoghaa. Ọzọkwa, chee na ọ bụrụ na nke a ga-ekwe omume site ọnụ ọgụgụ dị ala nke euro 700.000, nke maka nnukwu ụlọ ọrụ dịka Samsung, Sony, LG, Huawei, wdg, wdg, bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwụkwọ aka, ụlọ ọrụ ndị a ga-ewepụ ndị a ka ha wee nweta ọrụ ahụ n'okpuru aha aha ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Cicret Mgbaaka, mgbaaka nke ọdịnihu ma ọ bụ gam akporo Fake ọzọ?
Kpamkpam kwenyere, ọ bụ ihe adịgboroja adịgboroja, maka ugbu a, enweghị ike ịmepụta ọla aka, mana ejiri m n'aka na enwere ike ịmepụta akwa n'ime afọ ole na ole, ihe dịka afọ 20.
Ee, echere m otu ihe ahụ, achọgharịala m weebụsaịtị niile mana enweghị m ike ịchọta ihe ọ bụla ọkachasị na ọ nweghị ihe dị njọ, echekwara m na n'oge a ha kwesịrị ịnakọta euro 700, kwa ụdị mgbaaka a chọrọ batrị dị ukwuu mee ka onyonyo ahụ pụta ìhè ma nha ya agaghị ekwe ka ịwụnye batrị zuru oke na-enweghị eletrọniki dị mkpa maka ọrụ ya
David mbụ dijo
Ndewo David, ọ dị nwute na m ga-agwa gị na nke a bụ nke JZ mepụtara, yabụ ọ bụrụ na ọ kwụsịghị atụmatụ ya, anyị ga-ezukọ n'ụlọ ikpe wee gaa n'ihu ịgba ya akwụkwọ. Jiri ezi enyi gị bụ David
Zaghachi Devid ihe mbụ
Ọ dị mfe ịrụ ọrụ na-enweghị isi, ọ ga-arụ ọrụ naanị maka ịdị larịị n'ihi na ọ ga-adị mkpa iji dozie ogwe aka na akpụkpọ ahụ yana uwe ka njọ. Na afọ a MWC-2017, nnukwu akara gosipụtara ihe ngosi ihuenyo ya na tebụl dị ọcha, na-echebara omume aka na tebụl ruo 22 sentimita asatọ…. ma na otu ogwe aka ... Ọdịnihu? Hologram n'ime ikuku? Onye ọ bụla na-ele ekwentị gị? Njikwa na anya gị na mebere na ihuenyo n'ihu gị retina? ma ọ bụ mgbaaka graphene ihe dị ka 6 cm n'obosara na nke nwere ike ịdị na-agbanwe n'ụzọ zuru oke na nke nwere ike ịmịkọrọ mmiri? Mahadum Cambridge, MWC-2017.
Akpọrọ m aghụghọ na adịgboroja asị, ọdịbendị ịntanetị na-arụ dị mkpa, kwa ụbọchị ndị nwere ọgụgụ isi karịa ịntanetị na-erite uru nke ndị ezigbo mmadụ.